I-iPhone X bekulindelwe ukuba iphathe iminwe yokufunda phantsi kwescreen; endaweni yoko kugqityiwe ukubheja kwitekhnoloji entsha ebhaptiziwe njenge "Face ID". I-Samsung Galaxy Note 8 nayo ayibhejanga koku kunokwenzeka kwaye ibekwe-njengakwi-Samsung Galaxy S8 - umfundi ecaleni kwekhamera. Kunokwenzeka ukuba amaKorea akasengowokuqala ukumilisela iqela elineli nqaku; i IVivo Xplay7 iya kuba yeyokuqala kubo. Nangona kunjalo, umthengi wombane omkhulu unelungelo elilodwa lomenzi elilodwa. Kwaye ibhekisa kumfundi ofaka iminwe phantsi kwescreen.
Kubonakala ngathi imihla sele ilungile ngandlela yimbi ukuba isisombululo sokufikelela kwiiflegi zokuqala zeSamsung, Galaxy S9. Endaweni yoko, ungabheja ngokuyifumana ngaphambili kwakhona, nangona inokubuyela umva: isiqithi sinokudalwa emazantsi esixhobo, kufana neselfowuni ka-Apple.
Ngokwe patent yakutshanje ye-Samsung, umfundi omtsha weminwe phantsi kwesikrini Ngaba inzwa yoxinzelelo. Oko kukuthi, kuyakubakho iinxalenye zescreen eziya kuthi ziqonde ukuba umsebenzisi ucinezele nzima kunesiqhelo kwiphaneli ukwenza isenzo.
Kwelinye icala, njengoko besesitshilo, imihla isondele kakhulu ukwenza olu hlobo lwetekhnoloji ekuqaleni konyaka ka-2018. Kodwa ukuba sibeka izinto zethu kulwaziso lwekwindla, Sifumana i-Samsung Galaxy Note 9Imodeli ephezulu enokuthi ibandakanye uyilo olutsha lweSamsung. Ngoku, kunokwenzeka ukuba imephu yendlela yakwa-Samsung iyafana ne-Apple: ukubheja kwitekhnoloji yokuqonda yobuchwephesha echanekileyo kunye nekhawulezayo. Ngaphezu, ngokwe-portal yaseDatshi Iklabhu yeGlasi, I-Samsung Galaxy S9 ingadibanisa inzwa ye-3D ngaphambili kwayo ukuphucula ukuchaneka kokuqondwa kwayo kwe-Iris.